]N'ogbe Lithium Pallet Jack, Lithium Electric Pallet Truck | Staxx
Ụgbọ ala pallet aka
Akwụkwọ ntuziaka & Semi-eletrik Stackers
Anyị nwere otu ndị na-ere ahịa ọkachamara
Anyị nwere ndị ọkachamara mgbe-ahịa Ọrụ Team
Anyị nwere ndị otu njikwa ọkachamara
Anyị nwere ndị otu R&d ọkachamara
Anyị nwere ndị ọkachamara na-emepụta ihe
Mgbe-ire ahịa Sop
Otu ngwọta nkwụsị maka akụrụngwa ejizi ihe eji eme gwongworo lithium pallet.
Staxx Lithium pallet Truck Uru:
1 Anyị nwere ọkachamara lithium pallet Jack sales otu
2 Anyị nwere a Professional mgbe-sales ọrụ otu egwuregwu
3 Anyị nwere a Professional management otu
4 Anyị nwere a Professional R&D otu
5 Anyị nwere a Professional n'ichepụta lithium pallet ụgbọala otu
Staxx otu nwere ọgaranya ahụmahụ imewe na n'ichepụta, nke nwere ike n'ụzọ zuru okè izute ahaziri mkpa nke ndị ahịa. Ọ nwere ike na-enye ahaziri ngwọta maka ndị ahịa.
]MARA KA ESI EME
Staxx lithium pallet Jack nwere ikike nke imewe, mmepe na mmepụta.
Na-aghọta mkpa n'ezie nke ọgwụgwụ ọrụ na lithium pallet Jack ahịa.
The-anwale na nyochasịkwara rịọ anyị mmekọ lithium electric pallet ụgbọala quality obi ike.
The ediomi n'etiti ndị ahịa na Staxx lithium pallet ụgbọala nwere ike ahaziri.
]LITHIUM pallet ụgbọala ngwaahịa
Nye lithium pallet Jack, lithium electric pallet gwongworo
Kachasị mma ELECTRIC STRADDLE LEG STACKER EZI RỤMA - Staxx
]Dị ka Chinese kacha mmaonye na-emepụta stacker eletriki, anyiỌnụ ahịa Ụkwụ Ụkwụ eletriki dị ọnụ ala na nke a pụrụ ịdabere na ya, Staxx Best LIGHT DUTY ELECTRIC STRADDLE LEG STACKER Ọnụahịa ụlọ ọrụ - Staxx, Mmekọrịta dị n'etiti ndị ahịa na Staxx nwere ike ịhazi ya. Ọ ga-amasị anyị ịkwado nkwado anyị, dị ka atụmatụ ịzụ ahịa, ọrụ ire ere na mkpa ndị mmekọ anyị.
Ahaziri WS usoro LIGHT ọrụ eletriki STACKER emepụta Site China
]Staxx ahaziri WS usoro LIGHT ọrụ eletriki STACKER emepụta Site China, The isi technology nke electric nkwakọba gwongworo bụ ike unit, gụnyere moto / nnyefe, njikwa na batrị. Staxx nwere ikike onwe chepụta, ịzụlite na mepụtara isi akụkụ, na-akpọkọta ndị na-emepe emepe 48V brushless drive technology. Nke a technology a nwaleworo ma gbaara site TÜV Rheinland site otu ule.Electric STACKEr price onwe mepụtara Staxx bụ oké ọnụ, N'ogbe na a pụrụ ịdabere àgwà.
N'ogbe pantograph rute stacker nwere ezigbo ọnụ ahịa - Staxx
]Staxx N'ogbe pantograph rute stacker na ezigbo ọnụ ahịa - Staxx,Anyị nwere ndị otu njikwa ọkachamara.Pantograph Reach Stacker dị mmana elu eletriki pantograph iru erustacker na 1500kg loading ikike, ebulielu ruo 6m, ngwọta maka ebe ọrụ siri ike.
Smart Function Li-ion Batrị Electric Pallet Truck Ndị na-ere ahịa
]Ahụ kọmpat, dị n'ebe ọ bụla siri ike ebe a na-eji gwongworo pallet aka.Ndozi dị mfe, ọtụtụ akụkụ na-arụzi ya yiri gwongworo pallet aka.◆ Akwụkwọ ikike afọ ise na chassis◆ 6 sekọnd achọrọ iji wepụ batrị◆ Gradeability na 1500/1800kgs ibu: 6%◆ Site na breeki, ụgbọ ala ahụ nwere ike ịkwụsị ebe ọ bụla, oge ọ bụla, n'agbanyeghị na mkpọda, ebuli ọdụ ụgbọ ala ma ọ bụ ikpo okwu.◆ Ịnya ụgbọ ala aka nriEPT15 / 18H ụgbọ ala pallet zuru oke nke nwere moto na-enweghị ahịhịa, ezigbo na mmefu ego dị ọnụ ala maka iji dochie gwongworo pallet aka na ụgbọ ala pallet eletrik na-arụ ọrụ n'ahịa, iji weta arụmọrụ dị elu na pallet na-enweghị mgbagha.Dabere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke onwe ya, teknụzụ na usoro njikwa, STAXX ewepụtala usoro ndị na-ebubata ngwaahịa zuru oke, wee mepụta otu nkwụsị na-ebunye ikpo okwu ụlọ nkwakọba ihe, yana ndị na-ere ahịa 500 n'ụlọ na mba ọzọ.
]BANYERE US - Staxx pallet ụgbọala profaịlụ
]Professional lithium pallet ụgbọala nkwakọba ngwá emeputa
Ebe ọ bụ na reorganization nke ụlọ ọrụ na 2012, Staxx lithium pallet ụgbọala na eze banyere ngalaba ulo oru nke n'ichepụta na-ekesa nke nkwakọba ngwá, dị ka lithium pallet Jack, lithium pallet ụgbọala, lithium electric pallet ụgbọala. Na 2016, ụlọ ọrụ na aha ọhụrụ ika "Staxx".
Dabere na onwe ekesịpde factory, na ngwaahịa, nkà na ụzụ na management usoro, Staxx kpụrụ a zuru soplaya usoro, na-kere a onye-nkwụsị kpọbata n'elu ikpo okwu, na mmadụ 500 na-ere ahịa n'ụlọ na mba ọzọ.
]STAXX COMPANY oruru
]STAXX LITHIUM pallet ụgbọala COMPANY Personnel
]ụlọ ọrụ mmepụta ihe ebe
]ODM omenala Ngwọta
]LITHIUM pallet Jack n'ichepụta
elu arụmọrụ& ỊDỊ MMA DỊ ELU
Ndị China na-emepụta ihe ndị na-emepụta ụgbọ ala pallet - Staxx
]Staxx hand pallet gwongworo wheel mmepụta mgbe niile na-agbaso ụkpụrụ nke ụkpụrụ dị elu na ịdị elu dị elu, yana ọtụtụ usoro na mmepụta akpaaka iji hụ na ojiji nke ndị ahịa.
STAXX PALLET TRUCK HYDRAULIC LIFTING SYSTEM INTERNET
]STAXX PALLET TRUCK HYDRAULIC LIFTING SYSTEM NDURABILITY Test,KA Anyị lelee VIDIO wee mụtakwuo!
ỤLỌ Nnwale ntachi obi nke ụgbọ ala pallet
]Lelee ebe a ka ịhụ ebe ule ntachi obi ụgbọ ala STAXX PALLET.
]Inwe na aka US
Dị nnọọ ahapụ email gị ma ọ nọmba ekwentị N'ELU kọntaktị ụdị Ya mere, anyị nwere ike ije ozi unu!
Nwebiisinka © 2021 Ningbo Staxx Material Handling Equipment Co., Ltd echekwabara ikike niile.